Gbochie ngwa arụnyere na android mfe | Akụkọ akụrụngwa
Otu esi egbochi ngwa gam akporo nke ekwentị mkpanaka anyị
Mgbe anyị nwere ngwaọrụ mkpanaka gam akporo (mbadamba nkume ma ọ bụ ekwentị mkpanaaka) ma ọ nweghị onye ọzọ na-eji ya, ọ nwere ike ọ gaghị adị mkpa ka ị jikwaa ngwa na ntọala nke akụrụngwa ahụ, ebe ọ bụ na ọ nweghị onye ọzọ ga-anwa ịbanye gburugburu ebe naanị anyị maara otu esi eji ya nke ọma.
Ma gịnị banyere ọ bụrụ na anyị nye nwatakịrị a obere nwatakịrị dị afọ iri; ọtụtụ ihe nwere ike ime n'oge ahụ, otu n'ime ihe kachasị emebi onye ọ bụla, onye na-akwọ ụgbọ mmiri ime ihe ike ma ọ bụ afọ na-ekwesịghị ekwesị ngwa n'ụzọ ọghọm. Ọ bụ n'oge ahụ mgbe anyị kwesịrị iche echiche banyere iji ngwá ọrụ na-enyere anyị aka igbochi ụfọdụ atụmatụ nke ngwaọrụ mkpanaka gam akporo, ihe anyị ga-arara onwe anyị nye na-eme n'isiokwu a site na enyemaka nke ngwa nchekwa.
A-4-ọbula pin iji chebe anyị gam akporo ngwaọrụ
Ngwa anyị ga - akwado ugbu a bụ «Avast Mobile Nche & Antivirus«, Otu na i nwere ike inwe ya kpam kpam free na igbachi 2 ọrụ nke gị gam akporo mobile ngwaọrụ, ihe na-ezuru ma ọ bụrụ na anyị na-eji nke a free na ọgụgụ isi n'ụzọ, ọ bụ ezie na ọ bụ mgbe niile ka ekwe omume nke inweta ụgwọ mbipute na-enwe ike igbochi ndị ọzọ ngwa na ọrụ na kọmputa. Ya mere na ị nwere ntakịrị echiche nke ihe ị nwere ike igbochi mgbe ị nwetara ngwá ọrụ a, anyị ga-atụ aro ihe ndị mmepe ya kwuru banyere ya:
Gbochie ịbanye na ụlọ ahịa Google play. Site na nke a, ọ bụghị naanị na ị na-egbochi ntinye nke ụfọdụ ngwa nke nwa ahụ nwere ike ịhọrọ na mberede, kamakwa ịzụta ụfọdụ n'ime ha ma ọ bụrụ na anyị ahazi kaadị akwụmụgwọ anyị na ụlọ ahịa a.
Mkpọchi usoro ntọala. Ọ dịkwa oke mkpa, ebe nwatakịrị ahụ nwere ike iji ihe nchekwa nke ngwaọrụ mkpanaka anyị, ihe nwere ike bụrụ ihe na-emerụ anyị ahụ.
Chedo ngwa anyị arụnyere. Site na ichedo ngwa anyị anyị ga - egbochi nwatakịrị ma ọ bụ onye ọ bụla ọzọ iwepu ngwa anyị kachasị amasị anyị na ọdụ.
Anyị ekwuola ihe atọ kachasị mkpa ị ga-echebara mgbe ị na-echekwa ngwaọrụ mkpanaka gam akporo anyị na "Avast Mobile Security & Antivirus", ọ ga-abụrịrị onye ọrụ njedebe nke na-akọwa ihe kacha mkpa maka iji ngwa ọrụ ahụ. Ozugbo anyị ebudatara ma tinye "Avast Mobile Security & Antivirus" naanị anyị ga - agba ya; na nnọọ oge anyị ga-ahụ na ihuenyo dị nnọọ ka nke anyị ga-edebe n'okpuru.
Dịka ị nwere ike ịmasị, n'akụkụ aka ekpe enwere nhọrọ nhọrọ ole na ole nke ngwa a na-enye anyị, na-ahọrọ maka oge nke na-ekwu «Ngwa Mkpọchi; mOzugbo, ndepụta nke ngwa na ọrụ niile nke sistemụ arụmọrụ anyị na njedebe ya ga-apụta, naanị ịlele igbe ọ bụla iji chebe ha. Cheta na ngwa n'efu ga - enye anyị ohere igbochi 2 nke atụmatụ ndị a niile, ọ nwere ike ịbụ ezigbo echiche ịhọrọ:
Playlọ Ahịa Google Play.
Nhazi nke sistemụ arụmọrụ anyị gam akporo.
Anyị ga kọwaa isi nchekwa 4-digit dị ka ihe nchebe ọzọ. Mgbe anyị nyefere onye dị iche na onye ahụ chọrọ ịbanye mpaghara 2 ndị a anyị gbochiri na mbụ dị ka aro, obere windo ga-apụta ozugbo nke a ga - agwa onye ọrụ ka itinye nọmba 4 nke paswọọdụ ahụ anyị kenyere na mbụ.
Ọ bụrụhaala na abanyeghị igodo a, ụdị ngwa ma ọ bụ ọrụ ọ bụla nke anyị chebere site na sistemụ a ga-emeghe.
Ugbu a, akụrụngwa na-enye anyị atụmatụ ole na ole n'ime nhazi nche, n'ihi eziokwu na onye ọrụ njedebe nwere ike ịkọwa, site na obere kalenda, ụbọchị na oge (site na oge akọwapụtara na oge dị iche) nke a ga-etinye n'ọrụ nchebe a. Obi abụọ adịghị ya, nke a bụ ọrụ dị oke mkpa iji wee, n'ihi na ọ bụrụ na ụmụaka ejiri ọnụ anyị na ngwụsị izu (ma ọ bụ n'abalị), anyị kwesịrị ịhazi ya nke mere na achọrọ igodo mkpọghe n'oge ndị ahụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Telephony » Mobiles » Otu esi egbochi ngwa gam akporo nke ekwentị mkpanaka anyị
Esi gbanwee pointer pointer na Windows 7
Etu ibudata ma wụnye Z Launcher na ngwaọrụ gam akporo anyị